Ndibatsireiwo, mukadzi weshamwari yangu anogeza asina kuvhara door remubathroom! - Masasi eHarare
Ask Tete Molly Ndibatsireiwo, mukadzi weshamwari yangu anogeza asina kuvhara door remubathroom!
Ndibatsireiwo, mukadzi weshamwari yangu anogeza asina kuvhara door remubathroom!
Ndibatsireiwo, mukadzi weshamwari yangu anogeza asina kuvhara door remubathroom! “Ini ndakabuda muZimbabwe mushure menzara yaruma muna 2007 ndakananga kuSouth Africa . Basa rakambonetsa pandasvika asi ndakazowana remapepa angu randaida. Ini ndinogara mubachelor flat, asi nyaya yanetsa ndeyekuti ndine shamwari yangu ari kuZimbabwe ane mukadzi wake akauya kuzotsvaga basa kuno. Igraduate yeAccounts yepa U.Z. Nyaya yanetsa hama dzangu ndeyekuti shamwari yangu yakandikumbira kuti ndipe mukadzi wake accommodation. Ini ndakamuudza kuti ndinogara muflat but handina kutaura kuti ibachelor flat, bed sitter chaiyo. Saka mazuva ekutangamukadzi airara pasi, asi zvino atanga kukomburena kuti mahips ake anorwadza nekurara pasi.
Zveshuwa amai vane chipo chavo chemahips zvekuti mamwe mazuva ndinonzwa hana yangu kurova nekukura kwaakaita zvinhu zvavo. Pane rimwe zuva randakabva kubasa masikati zvangu, ivo havana kuziva kuti ndingadzoke nekukurumidza. Amai vaigeza zvavo vasina kuvhara door remubathroom. Musi uyu hama dzangu I saw everything that can be imagined. Semukadzi weshamwari, I have kept my distance but now she is complaining of sleeping on the floor. Can I surrender my bed to her kana kuti we should sleep on the same bed. Ko handizoluma here? Ko shamwari yangu ikauya haindifungire kuti ndakatoluma ini ndisina? Saka chiri nani ndechipi kuluma ofunga zvake zviri correct kana kusaluma?
Ndibatsireiwo ndisati ndarasika hama dzangu.
mukadzi weshamwari anonaka